Date My Pet » Mahatsara sy maharatsy ny mifampiresaka Mampiaraka vehivavy tanora kokoa
Last nohavaozina: Jan. 16 2021 | 2 min namaky
Vao haingana fanadihadiana Midika izany fa ny olona ny taona irrespective no te hampiaraka ny vehivavy eo amin'ny tapaky ny 20 taona mahery kely. Raha ny hitan'ny ny fanadihadiana dia ho nino, na dia ny anti-panahy ao amin'ny 40s, 50s, na feno 60 taona ny daty tia vehivavy tanora kokoa noho izy be.
Nisy fotoana ny fiaraha-monina no tsy nanaiky ny fifandraisana eo amin'ny anti-panahy sy ny tanora ny vehivavy; na izany aza, ankehitriny efa niova be ny zavatra toy izany ny fifandraisana ary lasa tsara tarehy iombonana. Raha ny zava-drehetra momba ny fifandraisana toy izany dia tsy tsara, fa tsy tanteraka na ratsy. Ny fifanakalozan-kevitra eto ambany explores sasany mahatsara sy maharatsy ny mampiaraka ny vehivavy tanora kokoa.
Ny vehivavy tanora kokoa, noho ny taona, matetika tsy fihetseham-po avy amin'ny entana. Vehivavy zokiolona, etsy ankilany, Matetika very ny hatsarany malefaka vokatry ny iharam-dehibe kokoa eo amin'ny fiainana sy ny ratsy. Anti-panahy mpiara-miasa mitady izay mampiaraka Afaka mamelombelona azy ary dia toy izany no liana loatra amin'ny fihetseham-po ny vehivavy izay mavesatra entana.
Toy ny olona antitra, karakarainy ho tonga tsy sahisahy. Izany no mahatonga azy ireo hijery efa lehibe kokoa noho izay tena ireo. Ny hoe tamin'ny vehivavy tanora dia be afaka manampy ny olona hahazo indray ny very zest sy hahazo hery ampy ny hiaina ny fiainana amin'ny fomba feno; faharisihan'ny vehivavy tanora toa miasa mahagaga ireo lehilahy.
Mampiaraka tanora matetika dia manampy ny olona hahita ny an'izao tontolo izao avy amin'ny fomba fijery hafa. Anti-panahy matetika manomboka mino fa efa nahita ampy. Rehefa manomboka miaraka ireo lehilahy ireo vehivavy tanora kokoa noho izy be, Matetika izy ireo mba hanana ny tena fomba fijery vaovao. Mety mihitsy aza izy ireo manomboka manao zavatra tsy nataony talohan'ny.
Fahamatorana sy ny fahendrena Alalany ihany no ahatongavan'ny olona iray rehefa lasa lehibe; mijoro ho marina ny fanambarana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsy vita ny hosoka ireo toetra roa. Matetika rehefa ny voalohany dia ny kilalaon'afo fifandraisana eo amin'ny lehilahy zokiolona sy ny vehivavy tanora mitodika stale noho ny tsy fahampian'ny fahamatorana sy ny fahendrena ao amin'ny farany.
Raha tonga any ny fifandraisana amin'ny vehivavy tanora kokoa noho ianao be, anao Mety ho sarotra ny ho faly amin'ny am-pandriana izy noho ny firaisana ara-nofo avo fiara. Maro ny toe-javatra toy izany ny vehivavy eo ambany manomboka mitady firaisana ara-nofo hafa mpiara-miasa. Raha manao izany dia afaka manome fahafaham-po ny vehivavy ny firaisana, fa ny olona zatra izany ny mpiara-miasa dia mampitombo ny vintana ny fampivelarana ny aretina azo avy amin'ny firaisana.
Rehefa miaraka ny vehivavy tanora kokoa noho izy be, Mety ihany koa ny olona ho nanelingelina aminy tsy liana amin'ny fandaminana, ka afaka manao ny fianakaviana. Amin'izao fotoana izao, ankamaroan'ny vehivavy eo amin'ny tapaky ny 20 taona mahery kely, na tanora kokoa noho ny te hifaly amin'ny fiainana, manana asany tanteraka, ary mahazo vola be alohan'ny handaminana nidina. Toy ny olona izay tsy tanora intsony, antoka fa tsy nisy olona sahy mahita izany tena mora ny hanome azy ilay namany ka manomboka ny fotoana talohan'ny fianakaviana.
Toy ny hafa fifandraisana, fifandraisana eo amin'ny anti-panahy sy ny tanora koa ny fahamendrehana sy ny demerits. Izany, mba hanao toy izany izy roa mihitsy fifandraisana mahomby dia mila mahatakatra tsara ny tsirairay, ary tsy maintsy ho mifanaraka amin'ny tsirairay.
Ahoana no ho Long-Distance Fifandraisana asa
Ianao maka The diso Partners?